GURYAHA GEEDAHA KA SOO BAXA QALABKA DABOOLKA LEH GACMO GAAR AH, XEERARKA DEJINTA - DHISMAYAASHA
Geedka aqalka dhirta lagu sameeyo - dhismaha kharashka ugu yar iyo qiimaha hooseeya ee helitaanka miraha hore ee khudradda xilliga xagaaga.
Way fududahay in la rakibo, si sahlan u guurto meel kasta oo la rabo, oo waxaad ku kori kartaa wixii dalag beerta thermofilic ah.
Marka la barbardhigo caasimadda, qaababka culus ee qaabka lagu koriyo, naqshadeynta aqalka dhirta lagu koriyo ee cirifka sida ugu macquulsan. Faa'iidada waa in rakibku waqti yar qaato. Iyada oo rakibidda of aqalka dhirta lagu koriyo ayaa xitaa ilmaha xitaa.
Guryaha aqallada dhirta lagu dhejiyo waxaa lagu rakibi karaa meel kasta oo aagga ah, waxayna ku soo guuri kartaa, iyada oo ku xiran nooca dhaqanka uu u malaynayo in uu ku koro. Aad ayay u fiicantahay marka la eego sida loo hoggaansamayo aagga wareegga dalagga.
Saldhigga noocan ah ee aqalka dhirta lagu koriyo waxaa laga sameeyaa caag ama bir ah. Shuruudda ugu weyn ee maaddadu waa awoodeeda iyo dabacsanaanta waqti isku mid ah. Waxaa jira arda dhirta lagu koriyo ee noocyada soo socda:
- Arc of chloride polyvinyl. PVC waa qalab kuleyliye ah oo adkaysi u leh deegaan aashitada ah iyo alkaline oo xoogaa sun ah. Cudurka noocan oo kale ah waa iftiin iyo waqti isku mid ah oo xoog leh.
- Muuqaalka birta. Waxaa laga soo saaraa industrially ilaa tuubbo dhuuban oo dhuuban ama si madax-banaan oo ka soo duuban silig.
- Polypropylene arc. Awooddan, tuubo caag ah ayaa loo isticmaalaa, googooyaa dhererka loo baahan yahay. Xaaladda ugu weyn ee la doorto waa awoodda dhuumaha si fudud loo leexiyo, si ay u qaataan qaab isku dhafan.
Isgoysyada diyaarka ah ee ka soo baxa caleemaha ayaa hadda la heli karaa. Milkiilaha goob kasta wuxuu dooranayaa isaga oo ku xiran qiimaha iyo ujeedada dhismaha. Kuwa ugu caansan waa kuwa lagu koriyo ee soo socda:
"Dayas". Greenhouse oo ku saleysan polymer arcs leh qalabka daboolan ee daboolan. Dhexdhexaadiyaha tuubooyinka waa 20 mm, dhererkeedu waa 2 m. Dhulista dhulka waxaa lagu sameeyaa gacan qabashada lugaha.
Tirada tuubooyinka mashiinku waxay kuu oggolaanayaan inaad sameysid tunnel dherer ahaan 4 ilaa 6 mitir. Wareegga wax lagu daboolo - 2.1 m.
"Snowdrop". Qaabku wuxuu ka samaysan yahay Bacda PVC oo leh dhexroor 20 mm. Maqaayad daboolan oo aan lagu daboolin oo leh cufnaanta 42 g / m2. Waxay leedahay dherer kale (4,6,8 m). Waxaa lagu dhammeeyaa lugaha si loo rakibo iyo qalab loogu dhejiyo.
"Palisade". Qoryaha birta waxaa loo isticmaalaa qaab ahaan. Dhererka - 50 - 60 cm Waxa lagu dhameeyaa sheyga daboolka ah ama balaastik caag ah, dhejisyo gaar ah oo caag ah si loo xiro daboolka.
"Gherkin". Dhererka waa 1 m, dhererkeedu waa 5 m. Qaabdhismeedka - qalab bir galvanized galvanized. Duufaanta - filim caag ah oo leh dhejisyo. Waxaa lagu dhammeeyaa xarfaha si loogu xakameeyo filimka furan. Kulanka waxaa lagu sameeyaa qaloocyo iyo nuts, kaas oo xajistin kara arcaanka oo saldhig u ah guddiyada. Daboolida waxaa xakameynaya xadhkaha ku jira shaxda, kuwaas oo grooves lagu bixiyay kabaha.
Marka laga soo tago xirmooyinka loo diyaarshay, waxaad iibsan kartaa si gooni gooni ah oo ku habboon xajmiga maadada.
Geedka aqalka dhirta lagu daboolo waxaa loo isticmaali karaa laga bilaabo horraanta gu'ga ilaa dayrta goor dambe. Waad kori kartaa waxkasta oo kulaylka jecel, iyo sidoo kale geedo.
Nooc kasta oo dhir ah, waxaad dooran kartaa dhererka qaabka. In lagu koriyo oo ah height dhererka - 50-60 cm - geedo iyo qajaarka ayaa la koray. Naqshado badan ayaa loogu talagalay basbaas, yaanyo, ukunta.
Faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka naqshadaha
Iskudhafyada ka soo baxa xayawaanka raaxo leh dhaqdhaqaaqooda iyo sahlanaanta rakibidda.
Ku rakibidda dhismaha aasaasiga ah looma baahna.
Xilliga jiilaalka, si fudud loo gooyaa marka la isku laabo, taas oo macnaheedu yahay in uu kaydiyo booska kaydinta.
Intaa waxaa dheer, iyaga waa ku filan tahay marka la barbardhigo guryaha lagu koriyo oo qaali ah.
Si kastaba ha ahaatee, aqalka dhirta lagu koriyo ayaa leh tiro khasaare ah:
- Cirifka daboolka dibedda ah ma aha mid joogto ah wuxuuna u baahan yahay cusbooneysi joogto ah.
- Iyadoo dhammaan naqshadeynta naqshadeynta, waxay si fudud u bedeli kartaa saameynta dabayl xoog leh.
- In lagu koriyo ma qabsan karaan kuleylka dheeraadka ah, sida in lagu koriyo oo joogto ah.
Maqnaanshaha fursadda lagu iibsado aqalka dhirta lagu diyaariyo ee laga sameeyo laga soo bilaabo koollo leh alaabo daboolan, waxaa loo samayn karaa si madaxbannaan. Heera aqalka dhirta lagu koriyo wuxuu ka kooban yahay qaab iyo dabool. Tixgeli fursadaha lagu sameeyo aqalka dhirta lagu koriyo ee gacmahaaga.
Jiilka qaabeeya qaabka - qaybta ugu muhiimsan ee u adeegta saldhigga. Tani waxay ku saleysan tahay, waxaad ku dari kartaa wax kasta oo daboolan oo la beddeli karo hadba sida loogu baahan yahay. Waxaa jira fursado badan oo lagu sameyn karo arsar:
- Laga soo bilaabo tuubada iyo silig (ama khaanad). Tuubbo jir ah oo aan loo isticmaalin udeedkeeda waxaa loo jaraa meelaha banaan oo ay ku xiran tahay birta ama birta. Kadibna xabbad kasta waxaa la siiyaa qaab muuqda. Xayawaanku waxay ku dhegaan dhulka oo dhererka sariirta fogaan ah 50-60 cm midba midka kale.
- Laga soo bilaabo tuubooyin caag ah. Saldhigyada cirifka waa biinanka biraha ah ee ku dheggan dhulka oo dhererka sariiraha. Tuubooyinka khafiifka ah ayaa la geliyaa. Dhererka qaybaha tuubooyinka waxay ku xiran yihiin dhererka la rabo ee lagu koriyo. Laakiin laguma talinayo in qaybo ka badan 3 mitir dhererka lagu dhejiyo - aqalka dhirta lagu koriyo ee dhererkoodu uu noqon doono mid aan degganeyn oo ay ku adkaan doonto in lagu daryeelo dhirta ku jirta. Xoogga qaab-dhismeedka noocan oo kale ah, tuubbo dheeri ah ayaa lagu dhejin karaa dusha sare leh silig.
- Tuubooyinka PVC. Wixii aqalka dhirta lagu koriyo, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo shandado qoryo alwaax ah, taas oo qaybaha tuubbooyinka ay ku xiran yihiin. Qalabka tubaakada ee naqshadahan ma aha mid ku dhegsan dhulka oo ma xejin karo.
- Laga soo bilaabo profile ah biraha. Dhismahan waa mid adag oo xasilloon, laakiin wax-soo-saarkiisa wuxuu u baahan yahay qalab gaar ah - Boorama-tuubo. Qalabkan, tuubooyinka ayaa la siiyaa qaabka la doonayo. Tan iyo kuleylka u baahan yahay tuubbo dhexroor yar, buunshaha bender gacanta ku haysa ayaa la qabsan doona hawshan.
Waxaad ka arki kartaa dhowr geedo fudud oo laga soo bilaabo arsda iyo qalabka wax lagu daboolo ee fiidiyowga ah:
Waxaad arki kartaa koriinno kale oo aad ka heli kartid halkan: Halka laga helo polycarbonate, Wareegyada daaqada, Laga soo bilaabo tuubooyinka dhajiska, Laga soo bilaabo dhalada caaga ah, laga soo bilaabo dhalada caaga ah, qajaarka, filimka hoosteeda, Hoyga, laga bilaabo PVC, aqalka dhirta lagu koriyo, , Goosashada wanaagsan, Barafka, Sail, Dayas
Xulashada alaabada daboolan
Si beerista guul leh ee khudradda ee lagu koriyo ah, doorashada maaddada daboolka waa muhiim. Waa inay buuxiyaan shuruudaha soo socda:
- Way fiican tahay in laga gudbo raajooyinka qorraxda.
- Ugu badnaan dhirta ka ilaaliya hawada qabow.
- Hayso awood ku filan isticmaalka muddada dheer.
Dhammaan tayadaasi waxay leeyihiin laba nooc oo maaddo ah:
Xulo ballaaran oo filim oo loogu talagalay beeraha lagu koriyo iyo dhirbaaxada dhirta kala duwan, qiimaha iyo tayada ayaa la iibiyaa. Doorashada ugu jaban waa filim caag ah oo caadi ah. Laakiin qiimaha ay tahay qiimaha kaliya. Waa dhuuban, waxaadna u isticmaali kartaa oo kaliya hal xilli, ugu yaraan laba.
Dheeraad badan, in kastoo qaali qaali ah, ayaa la xoojiyay ama qalabyo filim lagu duubay.
Caawin! Waxay ka qaalisan yihiin filimka caadiga ah, laakiin waa mid aad u sii adkeysan kara.
Waxaa intaa dheer, qalabkan oo kale sababtoo ah dhumucdoodu waxay u adkeysan kartaa heerkulka hooseeya iyo si ka fiican sidii dhirta looga ilaalin lahaa xaaladaha halista ah.
2. Qalabka aan la taaban karin.
Waxay aad u jecel yihiin beerashada khudradda.
Calaamad kasta oo noocaas ah waxay ku kala duwan tahay dhumuc. Qalabka ugu yar waa cufnaanta 17g / m2.
Ugu badnaan dhererka - 60 g / m2.
Xulashada ugu wanaagsan ee lagu koriyo oo lagu koriyo, isku daridda cufnaanta ku filan iyo neefta oo si fiican u wanaagsan waa cufnaanta 42g / m2 ...
DAREEN! Beeraleyda qibrada leh waxaa lagula talinayaa in ay isticmaalaan laba qalab oo loogu talagalay aroosyada dhirta lagu koriyo.
Muuqaalka filimka daboolka bilawga hore, kahor intey beeraan dhirta iyo markaad abuuraysid abuurka dhulka. Xaqiiqdu waxay tahay in daboolka noocan oo kale ah uu ka caawiyo ciidda inay si dhaqso ah u diiriso isla markaana u ilaaliso kuleylka ugu sareeya si loo hagaajiyo geedo.
Markaas, marka dalagyada ay soo baxaan ama geedo yihiin diyaar u ah beerto ee lagu koriyo, daaha filimka waxaa lagu bedelay wax aan la taaban karin. Cabbiridani waxay u oggolaataa dhirta inay neefsato, taas oo macnaheedu yahay inay ka hortagtaa dhirta ka soo kululaato. Beddelida alaab aan la taabanin ayaa lagu sameeyaa bilawga kulaylka.
MUHIIM! Laguma talin in lagu daboolo aqalka dhirta lagu koriyo laga bilaabo qalabka aan khafiifka ahayn, maadaama ay jebinayso saameynta jahawareerka, lagama yaabo in ay kuugu adeegaan xataa ilaa dhamaadka hal xilli.
Diyaarso kabaha, daboolida alaabada iyo dhagaxyada ama lebbiska. Goobta diyaargarowga ah ayaa loo qodayaa ilaa ballaarinta loo baahan yahay. Iyada oo ku xiran naqshadeynta aqalka dhirta lagu koriyo, waxaan ku rakibnaa kabaha, iyaga oo ku dhajinaya dhulka fogaan ah 50-60 sentimitir midba midka kale, ama ku dheji sheyga diyaarsan. Waxaan dhejin karnaa xargo dheeri ah. Wire, xayawaan.
Waxaanu daboolnaa sheyga leh alaabada daboolan ee diyaarsan oo aad u hagaajinayso xagga hoose ee lebenyada ama dhagaxyada. Haddii naqshadeynta ay bixiso faahfaahin dheeri ah oo loogu talagalay maaddada wax lagu daboolo, waxaan sidoo kale ku rakibnaa.
Aqalkaaga lagu koriyo waxaa lagu rakibay meesha saxda ah, wax kastana waxay diyaar u yihiin beeritaanka dalagga beerta. Hadda dhirta waxaa laga ilaaliyaa dhaxan suuragal ah iyo goosashada waa la damaanad qaaday.